စိတ်ကုထုံးနှင့်ဆွေးနွေးပေးခြင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ - Counselling Corner
PHONE +959 664017251
တစ်ယောက်ချင်းကုထုံးကတော့ ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာ အခြေခံပါတယ်။ အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာ လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ ပညာ ရှင်နဲ့ လုံခြုံသော ဂရုစိုက်သော မပေါက်ကြားသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဆွေးနွေးပြီး ခံစားချက်တွေ၊ ယုံကြည်မှူ တွေ၊ အပြုအမူတွေ ကိုစူးစမ်းရှာဖွေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခက်ခဲသော၊ လွှမ်းမိုးနေသောမှတ်ဉာဏ်များနှင့်အတူ ပြောင်းလဲခြင်သောဘဝအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုကုညီရှာဖွေပေးပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပိုနားလည်အောင် နှင့် ကိုယ်ပတ်ဝင်ရှိလူများ ကိုလဲ ပိုမိုနားလည်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် လိုချင်သော ပြောင်းလဲမှုအပေါ် မူတည်ပြီးမိမိနှင့်သက်ဆိုင်သော ပန်းတိုင်သပ်မှတ်ကာ အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
အတွဲလိုက်ကုထုံးမှာတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လူမှုရေးပြဿနာတွေကိုအဓိကအာရုံစိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင် ပြောင်းလဲသောဆက်ဆံရေးတွေမှာ တစ်ဦးချင်း၏လက္ခဏာများ ဖြစ်ကြသော (အပြုအမူ၊ခံစားချက်၊စိတ်ပဋိပက္ခများ၊အတွေးဖြစ်စဉ်)၊လူနှစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးမှပြောင်းလဲခြင်းများပါဝင်သည်။ အတွဲလိုက်ကုထုံးက လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ လူနှစ်ယောက်ကြားမှ ဆက်ဆံရေးပြဿနာတွေကိုအာရုံစိုက်ပါ သည်။
မိသားစုကုထုံးဆိုတာကတော့ မိသားစုတွေ ကြားကလေးနက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် ကူညီပေးတဲ့ကုထုံးဖြစ်ပါသည်။ မိသားစုဝင်တွေကြားထဲကအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှု ပြောင်းလဲလာမှု ၊တိုးတက်လာမှူတို့ကိုကြည့်ပါသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး၊ဖြေရှင်းမှုတွေ ၊လုပ်ဆောင်နည်းတွေ၊ ရလဒ်တွေ မှာ မိသားစုဆက်ဆံရေးကအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အုပ်စုကုထုံးမှာတော့ကုသမှုခံယူသူတွေကိုသူတို့ပြဿနာတွေဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ၊ အခြားသူတွေဆီက ဝေဖန်မှုတွေကိုဘယ်လိုလက်ခံရမလဲကိုကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်စုကုထုံးက တစ်ဦးချင်းစီကို ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုများ၊လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုများ တိုးတက်လာအောင် ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီကို အခြားသူပြောသည်များအား နားထောင်စေခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်သိမြင်လာအောင် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
Copyright © 2020, Counselling Corner. All Rights Reserved.
Developed by: MMITSG